Password နောက်ပြန်လည်ခြင်း | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
Password နောက်ပြန်လည်ခြင်း	Posted by mm thinker on August 29, 2008
Posted in: Experience, IT & Blogging.	Tagged: IT.	Leaveacomment
ဒီနေ့နေ့လည် ကျနော့်မေးလ်ကို ဝင်တော့ ဝင်မရဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့က သူငယ်ချင်းပြောတာ သတိရပြီး Password အဟောင်းနဲ့ ဝင်တာ ရသွားတယ်။ Oh Your God ပါပဲ။ အဲဒါဘယ်လိုများဖြစ်တာတုန်း ရှင်းပြနိုင်ကြမလား။
← လက်သွေးခြင်း (၂)	ဆံပင် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...